HS:-Dhaliyarada Hiiraan oo dhawaan ka qeyb galay shirweyne uu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof Moxamed Shiikh Cismaan Jawaari soo abaabulay,kaasi oo looga hadlay arimo badan oo ay aad ugu riyaaqeen dhalintii nasiibka u yeelatay in ay ka qeybkalaan shirkaas.
Hadaba inkasta oo aanan inta badan waxyaabahii looga hadlay aan halkaan lagu soo koobi Karin hadane dhalintii reer Hiiraan ee shirkaas ka qeybgalay aad ayey u amaaneen Prof Jawaari waxeyna ku tilmaameen shaqsi degan oo wadani ah hadaladiisuna ay miisaaman yahiin aad ayeyna u farxad gelisay la kulanka ay dhalinta Hiiraan la kulmeen gudoomiyahooda Prof Jawaari.
Mid ka mid ah dhalinyaradii shirka ka qeybgalay ayaa dhalinyarada ku booriyey in gudoomiyaha hadiiba ay dhacdo inuu booqasho ku yimaado Hiiraan siweyn loogu soo dhaweeyo halkaas maadaama sida ya sheegeen uu u muujiyey Soomaalinimo.
Sida muuqata shacabka Hiiraan badanaa loogama baran in ay siyaasada gudoomiyaha baarlamaanka ka hadlaan waxeysa tani muujineysaa hadii shacabka lala kulmo in hanaanka dowladnimo lagu soo xiri karo jiilka cusub ee soo koraya,inkasta oo uu Soomaali badan la haray qabiilka oo si qaldan loo isticmaalo hadane markaad dhinacyo badan ka eegto bulshada qaarkeed sida ay ugu hanweyn yahiin la kulanka madaxda qaranka waxaad moodaa in shacabku waayeen cidkasbata.
Ma ahan oo kaliya dhalinta reer Hiiraan kuwa la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxaana dadkii halkaas iskugu yimid ka mid ahaa dhamaan dhalinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudahiisa intooda badan.
Marka shirarkaas guud laga soo tago waxaa markii ugu horeysay gudoomiyaha baarlamaanka la kulmay haween ka soo jeeda degaanada Puntland oo iyagana siwanaagsan uu u qaabilay gudoomiye Jawaari waana isku xirka noocaas ah waxa ay Soomaali badan u baahan yahiin maanta.
sikastaba dalka Soomaaliya qeyb bulshada ka mid ah waxey rajo ka qabaan iney arkaan wadanka oo nabad ah ayna mar uun soo laabato Soomaalinimadii iyo deris wanaagii, hayeeshee qaar bulshada ka mid ah oo dantooda shaqsiga ilaashanaya iyo dowlado ka macaasha fidnada ka aloosan Soomaaliya ayaa wadankaas la haray qeyrkiisna ka reebay.
Inkasta oo ay horey u booqdeen inta badan madaxda qaranka qar ka mid ah gobolada dalka hadane Prof Jawaari aad ayuu u yaraa socodka uu ku tagay qeybo badan oo dalka ka mid ah waxeyna u badan tahay hadii uu sii socdo shirarka uu la yeelanayo dhalinta Soomaaliyeed in siweyn degaano badan oo Soomaaliyeed loogu soodhaweyn doono.
· admin on January 03 2014 06:36:09 · 0 Comments · 1377 Reads ·
14,613,581 unique visits